ကလေးဘဝ ကာကွယ်နိုင်မှု ၁၇၂ နိုင်ငံမှာ မြန်မာက အဆင့် ၁၁၂ ရှိ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ကလေးဘဝ ကာကွယ်နိုင်မှု ၁၇၂ နိုင်ငံမှာ မြန်မာက အဆင့် ၁၁၂ ရှိ
epa05979355 Children and the women receive clothes from Buddhist monks and local well wishers during the new school building donation ceremony in BaungWa village, Paletwa township, Mindat district in Chin State, Myanmar, 18 May 2017 (Issued 21 May 2017). Nowaday, Chin woman are not wearing large earrings. Only few women are piercing their ear for large earrings. Population of Chin state is about 480 thousand in 2014 census. The state isamountainous region with few transportation links and remains one of the least developed areas of Myanmar. EPA/NYEIN CHAN NAING
ကလေးဘဝ ကာကွယ်နိုင်မှု ၁၇၂ နိုင်ငံမှာ မြန်မာက အဆင့် ၁၁၂ ရှိ
ကလေးသူငယ် ဘဝကို ကာကွယ်နိုင်မှု အရ အဆင့် ၁ (အကောင်းဆုံး) ကနေ အဆင့် ၁၇၂ (အဆိုးဆုံး) အဖြစ် သတ်မှတ်ရာမှာ နိုင်ငံ ၁၇၂ နိုင်ငံအနက် မြန်မာက အဆင့် ၁၁၂ ဖြစ်ပါတယ်။
Save the Children ရဲ့ Stolen Childhood အစီရင်ခံစာအရ ကမ္ဘာပေါ်က ကလေးသူငယ် ၄ ပုံ ၁ ပုံဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ် သန်း ၇၀၀ ကျော်ကို သုတေသန ပြုချက်အရ ကာကွယ်နိုင်သော ရောဂါတွေ ဒါမှမဟုတ် မတောတဆမှုကြောင့် သေဆုံးတာ၊ အရွယ်မတိုင်မီ လက်ထပ်တာ၊ ဆယ်ကျော်သက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှု ပြဿနာ၊ အကြမ်းဖျက်မှုတွေ၊ ကျောင်းမနေနိုင်တာ၊ အလုပ်လုပ်ရတာနဲ့ အာဟာရ ချို့တဲ့တာတွေဟာ ကလေးသူငယ်တွေအတွက် ကလေးဘဝကို ဆုံးရှုံးစေတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အုပ်စု ၄ စုအရ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ တတိယအုပ်စုရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာ ရှိနေပြီး ကလေးမွေးဖွားမှု ၁ ထောင်မှာ သေဆုံးမှု ၅၀၊ အဟာရချို့တဲ့ပြီး ပုညှက်တဲ့ ကလေးဦးရေ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းထွက်မှုနှုန်း ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိပါတယ်။
အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ မြန်မာရဲ့ အထက်မှာ တရုတ်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ ရှိနေပြီး မြန်မာရဲ့အောက်မှာတော့ အိန္ဒိယ၊ လာအိုနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့ ရှိကြပါတယ်။
နော်ဝေနဲ့ ဆလိုဗေးနီးယားက ကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မှု အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး နိုင်ဂျာနဲ့ အန်ဂိုလာနိုင်ငံတို့ကတော့ အနိမ့်ဆုံး အဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Previous articleအစိုးရသစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း ကျေးရွာပေါင်း ငါးရာကျော် လျှပ်စစ်မီးရရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့
Next articleအသည်းရောဂါ အခမဲ့ကုသပေးမယ့် မြန်မာအသည်းဖောင်းဒေးရှင်း စတင်ဖွဲ့စည်း